Tag: mkpado | Martech Zone
Otu esi eme ka ihe ederede Blog gi karia ka ihe kacha emetuta.
Friday, February 22, 2019 Bọchị Sọnde, Machị 7, 2021 Douglas Karr
Otu n'ime ihe mere m ji dee akwụkwọ m na-ede blọgụ na afọ iri gara aga bụ iji nyere ndị na-ege ntị aka ịde blọgụ maka ịre ahịa engine. Ọchịchọ adịghị ka usoro ọ bụla ọzọ n'ihi na onye ọrụ ọchụchọ na-egosi ebumnuche ka ha na-achọ ozi ma ọ bụ nyocha maka ihe ha zụrụ ọzọ. Optimizing a blog and the content within ọ bụla post adịghị mfe dị ka nanị atụba ụfọdụ Keywords n'ime mix… e nwere nnọọ ole na ole
Nsogbu nke Web 3.0 Nọgidere
Nhazi, nzacha, nkpado, ichikota, ịza ajụjụ, ndenye aha, ịhazi, ịhazi, ịkọwapụta, ịkparịta ụka n'networkntanet, na-esote, nchịkọta, mmasị, tweeting, nchọ, ịkekọrịta, ibe edokọbara, ịkọ ala, ịsụ ngọngọ, ịhazi, ịkọwapụta, nsuso, ịkọwapụta… ọ bụ ezigbo ihe mgbu. Mmeghe nke Web Web 0: Na 1989 Tim Berners-Lee nke CERN na-atụ aro ịntanetị mepere emepe. Ebe nrụọrụ weebụ mbụ gosipụtara na 1991 na World Wide Web Project. Ntanetị 1.0: Site na 1999 enwere nde weebụsaịtị atọ na ndị ọrụ na-agagharị n'ụzọ bụ isi site na ọnụ na ndekọ aha dịka Yahoo! Weebụ
Mkpado ndị a ma ama na dị mkpa iji kwado na Ecommerce
Iji kesaa, tụọ ma bulie mgbanwe ọ bụla iji melite nsonaazụ ecommerce gị, ijide data metụtara onye ọrụ ọ bụla yana omume dị oke egwu. Nweghị ike imeziwanye ihe ị na-atụghị. Kasị njọ, ọ bụrụ na ị machibido ihe ị tụrụ, ị nwere ike ịme mkpebi iji mebie ahịa gị n'ịntanetị. Dị ka Softcrylic, onye na-ere ahịa na-anọpụ iche na data na nchịkọta akụkọ na-ekwu, njikwa njikwa na-arụ ọrụ Digital Marketers 'yana nghọta dị elu na nsochi ndị ọbịa, ịkpa àgwà omume, ntugharị, nhazi na nnabata data.
Omume kachasị mma maka usoro na ọkwa ọkwa ọkwa
Amaghị m na m gaara akpọ infographic a Otu esi emepụta ozi zuru oke; Agbanyeghị, ọ nwere ụfọdụ nkọwa doro anya banyere ihe omume kacha mma na-arụ ọrụ maka imelite blọọgụ gị, vidiyo na ọnọdụ mmekọrịta gị na ịntanetị. Nke a bụ okwu nke anọ nke akwụkwọ ozi ha na - ewu ewu - ọ na - agbakwunye na ịde blọgụ na vidiyo. Itinye onyonyo, ịkpọ oku ime ihe, nkwalite mmekọrịta mmadụ na hashtags bụ ezigbo ndụmọdụ ma na-elegharakarị anya dị ka ndị ahịa na-arụ ọrụ ịgbasa ọdịnaya ha. M
BrightTag: Platform Njikwa Tag Enterprise
Tọzdee, Ọktoba 31, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Okwu abuo nke ndi okacha amara ahia ahia n’agha na agha n’iru na intaneti bu ikike ibelata oge ibu saiti ha na ike iweputa ihe nkpado ngosiputa nke ozo na websaịtị ha. Corlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ahụkarị nwere ike ịnwe oge itinye aka na-ewe ọtụtụ izu ma ọ bụ ọnwa iji nweta mgbanwe na saịtị ahụ. Otu n'ime ndị na-ahụ maka ọrụ anyị agbakoro BrightTag's enterprise tag management na saịtị ha yana nsonazụ dị egwu. Ebe nrụọrụ ha na-agba ọtụtụ nchịkọta